Globecast သည်ဥရောပရှိ Ad Insertion Platform နှင့် ပူးပေါင်း၍ SSDAI စွမ်းရည်များကိုတိုးချဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Globecast ဥရောပတိုက်တွင်ကြော်ငြာထည့်သွင်းပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. အားဖြင့် SSDAI စွမ်းရည်ချဲ့ထွင်
Globecast ဥရောပတိုက်တွင်ကြော်ငြာထည့်သွင်းပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. အားဖြင့် SSDAI စွမ်းရည်ချဲ့ထွင်
Globecast, မီဒီယာများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ပေးသူအတွက် (AIP) ကဆွစ်ဇာလန်အခြေစိုက်ကြော်ငြာ INSERT ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. နောက်ထပ် Server-side ပြောင်းလဲနေသောကြော်ငြာသွင်းများ၏ပေါင်းစည်းမှု (SSDAI) စွမ်းရည်မှတဆင့်နေရာတိုင်းမှာ OTT ဗီဒီယိုအားပလက်ဖောင်းက၎င်း၏တီဗီချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်ရဲ့ကြေညာလိုက်ပါတယ် ဥရောပ။
Frederic Torasso, ကုန်ပစ္စည်း Manager ကိုတီဗီ Globecast နှင့်အတူနေရာတိုင်းမှာ OTT ဗီဒီယို, OTT ဗီဒီယိုကန်ဆောင်မှုများအတွက်ကြည့်ရှုသူအရေအတွက်အဆိုပါစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကမ္ဘာတဝှမ်းမြင်နိုင်ပါသည် "ဟုပြောသည်။ သို့သော်ထိုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ငွေရှာခြင်းအတွက်အထူးသဖြင့် OTT ပလက်ဖောင်းနှင့် app များကိုမှတဆင့်ကြည့်ရှုအားပေး linear ထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုများအဘို့, ပိုမိုရှုပ်ထွေးသက်သေပြခဲ့သည်။ SSDAI ဝေးသောသာလွန်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမှတဆင့်ကြည့်ရှုသူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးပွါးကြောင်း, ချောမွေ့စွာပစ်မှတ်ထားပြီးအလွန်အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်ပေးခွငျးဖွငျ့ဤပြောင်းလဲစေပါသည်။ အလှည့်မှာတော့ဒီပြသခံရသည့်ပစ်မှတ်ထားကြော်ငြာများမှထိရောက်မှု, တိုင်းတာခြင်းနှင့်ပြန်လာချဲ့ထွင်။ "
AIP 2007 အတွက် OTT နည်းပညာများထည့်သွင်း, 2011 ကတည်းကဒီဂျစ်တယ်တီဗီနှင့်ကြော်ငြာသွင်းဈေးကွက်ထဲမှာတက်ကြွလာခဲ့သည်။ 2017 AIP ခုနှစ်တွင်တီဗီချန်နယ်လ်အွန်လိုင်းကြည့်ရှုအားပေးကြသည်သည့်အခါတီဗီဘူတာနဲ့ content provider များကို၎င်းတို့၏ linear ကြော်ငြာအားလပ်ချိန် monetise ခွင့် DAIConnect စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင်လည်းစီးပွားဖြစ်ခြမ်းကိုင်တွယ်ရသော AIP ငွေရစေသော, စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
AIP ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြေရှင်းချက်ကြော်ငြာချုပ်သုံးပြီးချောမွေ့စွာအတွေ့အကြုံကိုပေး, အော်ပရေတာ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် OTT ပံ့ပိုးပေးသည် dynamically ကိုမဆိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် On-demand ဗွီဒီယို streams အတွင်းကြော်ငြာတွေထည့်သွင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ နယူးပရီမီယံကဗီဒီယိုကြော်ငြာသိုလှောင်မှုနေ့ကတဦးတည်းအနေဖြင့်ဖန်တီး monetised နိုင်ပါသည်။ ကြော်ငြာအပြည့်အဝမယ့်ရုပ်သံလိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ရှုထောင့်ကနေအတည်ပြုကြသည်။ AIP ရဲ့ SSDAI ဖြေရှင်းချက်က၎င်း၏လက်ရှိနှင့်အသစ် OTT ဖောက်သည်အဘို့ဤငွေရှာခြင်းအတွက်အင်္ဂါရပ်အားဖွင့်, နေရာတိုင်းမှာ OTT ကဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှု Globecast ရဲ့တီဗီသို့ပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်သောအဖြစ် Globecast ရဲ့ OTT တီဗီနေရာတိုင်းမှာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအပြည့်အဝလုံခြုံမှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့် headend ဝန်ဆောင်မှုစျေးကွက်-ခေါင်းဆောင်များ Akamai နှင့် CenturyLink အပါအဝင်မျိုးစုံ CDNs မှဆက်သွယ်မှုပေါင်းကစားသမား / apps များပါဝင်သည်။ ဒါဟာအစပယ်-ဝန် CDN, ကြည့်ရှုသူများအတွက်အတွေ့အကြုံ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်အောင်နေချိန်မှာသူတို့ရဲ့ CDN ကုန်ကျစရိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးဖွင့်ထားတဲ့ဆန်းသစ်အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်။
Laurent Potesta, AIP ၏တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ Globecast နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ခြင်းတို့ကိုသူတို့နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လှမ်းမမီချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်သိသိသာသာနေရာတိုင်းမှာဖြေရှင်းချက်သူတို့ရဲ့တီဗီများ၏စွမ်းရည်များတိုးပွါး "ဟုပြောသည်။ ဒါဟာထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာရှင်များနှစ်ဦးစလုံးတစ်အမှတ်တံဆိပ်-လုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အရည်အသွေးမြင့် End-user အတွေ့အကြုံကိုပေးစဉ်ထုတ်လွှင့်င်ငွေတိုးမြှင့်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ "
Torasso ကြော်ငြာရှင်များတိုး, အစီအစဉ်တသူတို့တွေဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာတွေကိုဝယ်တူညီသောလမ်း linear တီဗီကြော်ငြာသိုလှောင်မှုကိုဝယ်ခြင်းငှါမျှော်လင့်နေကြသည် "ကဆက်ပြောသည်။ SSDAI နှင့်အတူ, ဥရောပတိုက်တွင် AIP နှင့်အတူလက်တွဲအတွက် Globecast clients များ OTT ကြည့်ရှုရန်အလိုအလြောကျပစ်မှတ်ထားကြော်ငြာတွေထောက်ပံ့, ကန့်သတ် CAPEX အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲနေသောကြော်ငြာသွင်းလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့နိုင်ပါ။ "
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု OTT လှံ & Arrows SSDAI ။ Stievie တီဗီ။ Server-side ကြော်ငြာသွင်းပလက်ဖောင်း က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-09
ယခင်: အတ္ထုပ္ပတ္တိ-ဗဟိုပြု, ဒိန်းမတ်'S တီဗီ2/ FYN FOR အနာဂါတ် cloud-base သတင်းကဏ္ဍညျဆောကျရနျ MEDIABILITY
နောက်တစ်ခု: 25 GbE မှ GB ကို Labs ကဒုံးကျည် FastNAS သိုလှောင်မှုဆက်သွယ်မှု